chhalphal News - जे गरे कैलालीका मेयरले ठीकै गरे !
जे गरे कैलालीका मेयरले ठीकै गरे !
मङ्गलबार, २९ फागुन २०७४, १० : १९
कैलालीका मेयर ममताप्रसाद थारुले बोक्सीको आरोपमा कुटिएकी राधाको रोधन सुनेनन् । सुनेर उनलाई फाइदा पनि थिएन । नसुनेका कारण बेफाइदा पनि केही भएको छैन । सामाजिक संजालमा दुई चार दिन कोकोहोलो मच्चिन्छ । आखिर हिसाव ममताप्रसादकै पक्षमा पर्नेछ । दुनियाँका नजरमा बदनाम भएपनि ममताप्रसाद स्थानीय स्तरमा नायक दरिने छन् । उनलाई नायक बनाउनका लागि राज्य संयन्त्र र राजनीतिक शक्ति तयार छ ।
अबको दृश्य यस्तो हुनेछ ।
घोडाघोडीमा प्रहरी तैनाथ हुनेछन् । राधालाई बोक्सी करार गरी निर्घात कुटपीट गर्दा रमिते बनेका स्थानीय त्राहीमाम हुनेछन् । राज्यसंयन्त्रले सबैलाई एकै नाशले दोषीझैँ व्यवहार गर्नेछ । डरले हायलकायल स्थानीयको एकमात्र आशा ममताप्रसाद हुनेछन् । सुरक्षाको ओत बन्नेछन् ममताप्रसाद । ममताप्रसादको लबिङ केन्द्रसम्म पुग्नेछ । उप्परवाला आफ्ना भएपछि जेपनि सम्भव छ भन्ने कुरा मेयरसम्म भइसकेका ममताले नबुझ्ने कुरा भएन ।
बाहिर जे भनेपनि भित्र कार्यकर्ता बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा चरीदेखि मनाङेसम्मलाई माया गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अरुले भनिरहनुपर्छ र ? समाज पछौडे छ, व्यक्तिविशेषलाई दोष दिएर कहाँ हुन्छ ? संसदमा सुनिइसकेको छ । राधामाथि गरिएको बर्बरता देखेर मन कुढिएकाहरुको मन बिस्तारै बिषायन्तर हुनेछ । समाजमा यस्ता घटना भइरहन्छन् । मनहरु तरंगित हुँदै गर्छन् । घोडाघोडीमा मात्र कति दौडियोस् सधैँ सबैको मन । केही दिनमा घोडाघोडी आमरुपमा ओझेल पर्नेछ । र, त्यही मौकामा पछौडेपनलाई कारक बनाउँदै ममताप्रसादलगायत सबैलाई उन्मुक्ति दिइनेछ ।
ममताप्रसाद समाजका नायक बन्नेछन् । दुनियाँले जे सुकै भनोस् सो समाजका लागि ममताप्रसाद अकाट्य नेता बन्नेछन् । यी नभएको भए हामी सब खोरमा हुन्थ्यौँ भन्ने भय र आश्था स्थानीयमा संचारित गराइने छ । अर्को पालीपनि एमालेले टिकट उनैलाई दिनेछ । स्थानीय तहमा जो लोकप्रिय छ उसैले टिकट पाउने निश्चित छ । आखिर भोट हाल्न अन्तको आउने होइन, हार्नेलाई टिकट दिन एमाले लाटो छैन ।
मानिलिउँ ममताप्रसादले बोक्सी काण्डमा राधाको पक्ष लिएका हुन्थे । उनले प्रहरी प्रशासनलाई बोलाएर दोषीलाई पक्रन लगाउँथे । परिणाम के हुन्थ्यो ? विपक्षीले गाउँलेलाई साथ दिन्थे । ममताप्रसाद एक्लिन्थे ।
उस्तै परे सामाजिकरुपमा बहिस्कृत हुन्थे । बहिष्करणमा परेका ममताप्रति पार्टीको समेत बक्र दृष्टि रहन्थ्यो । खेल आफ्नो विपक्षमा पार्ने गरी एमए पढेका ममताप्रसादले किन एक्ली राधाको साथ दिन्थे ! बोक्सीको आरोपमा राधा कुटिएसँगै अर्को एउटा दोकान चल्ने छ । राजनीतिकरुपमा समेत सक्रिय समाजसेवीको एनजिओ वा एनजिओहरु घोडाघोडीमा चलबलाउन थाल्नेछन् ।
बोक्सीका रुपमा महिलालाई बिम्बित गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा संस्थाले अभियान चलाउनेछन् । काठमाडौँ वा धनगढीमा बिशेष कार्यक्रम गरि प्रतिवेदन बुझाइने छ । यत्ति हो, बेलादेबीपुरको कथा फेरिपनि फरक शैलीमा भनिने छ ।
ममताप्रसादको बाध्यता बुझ्दिने प्रयास गरौँ । उनी समाजका खबरसँग बेखबर छैनन् ।
कैलालीकै बेलादेबीपुरमा पोहोर यही प्रकृतिको घटना भएको थियो । बोक्सी आरोपमा एक बृद्धाको मुखमा दिशा कोचियो, गुप्ताङ्घमा लाठी । गाउँका बडघरसहितका सो घटनामा सामेल थिए । काठमाडौँमा आतंक मच्चियो । केही दिन कोकोहोलो सुनियो । त्यसपछि के भयो ? भनिरहन नपर्ला । माथि जे दृश्य देखाइयो, त्यही देखियो त्यहाँ पनि ।
बोक्सीका नाममा पीडित किशोरी हुन् वा बृद्धा, अन्तिममा सोही समाजमा बस्नुपर्छ । उनीहरुलाई समाजसँग संघर्ष गर्न दीर्घकालिन शस्त्र र शास्त्र दिइन्न । अन्तिममा विषय मिलापत्र वा आत्मसमर्पणमा टुग्याइन्छ । राजनीतिक दललाई बोक्सीको आरोप खेपेकी एउटीको भोट नगन्य हुन्छ । सयौँ रमितेको भोटले निर्वाचनमा अर्थ राख्छ । कुरा अन्तिममा भोटको राजनीतिमा गएर टुँगिन्छ ।
त्यसैले ममताप्रसादले जे गरे ठीकै गरे ।
यदि यसो होइन भने, बोक्सी काण्ड, बलात्कार काण्ड आदिमा राजनीति नहेरियोस । दोषि माथि ममता नदर्शाइयोस् ।